सर्वोच्चको चित्त : जन्मकैद गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि ! – Naya Kura Daily
July 23, 2020 99
८ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइराला बिहीबार रिहा भएकै दिन उनीविरुद्ध सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको छ ।
Prevपशुपतिमा साँधु बनेकी जेनीलाई नाँचगानमा लाग्यो बन्देज,अब त्रिशुल बाकेर यसो गर्ने घोषणा (भिडियो सहित)
आज अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको जन्मदिन; कति वर्ष पुगिन् ?
पूजा शर्माको आक्रोश : पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ?